March 2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Computer software Networking Tool
TeamViewer9Enterprise 9.0.32494
Maung Pauk at 11:32:00 PM 0
TeamViewer ဆိုတဲ့ Software ဟာ Network တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. အင်တာနက်ရှိမယ်ဆိုရင် အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ကိုယ့်ကွန်ပျူတာသုံးသလို ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံကနေ အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ကွန်ပျူတာကိုလည်း လှမ်းပြီး သုံးလို့ရပြီပေါ့.. ဒါ့အပြင် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာအချင်းချင်း ဖိုင်အလွှဲအပြောင်းလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်.. Video Chat လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်..
ကိုယ့်ဆီက ID နဲ့ Password ကို အခြားသူကို ပေးလိုက်ရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို Remote Control လုပ်နိုင်သလို အခြားကွန်ပျူတာကို ထိန်းချုပ်ချင်ရင် အဲဒီ ကွန်ပျူတာရဲ့ ID နဲ့ Password လိုပါမယ်.. ဖုန်းထဲမှာ app ထည့်ထားပြီး ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာလည်း ချိတ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်..
Full Version လုပ်နည်းကတော့
Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ.. ပြီးရင် ပိတ်ပစ်ပါ..
ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေနားက Tray ထဲမှာ Teamviewer icon လေးကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit လုပ်ပါ..
Patch ကို Run ပြီး Patch ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. Full Version သုံးနိုင်ပါပြီ..
TeamViewer ဆိုတဲ့ Software ဟာ Network တဈခုတညျးအတှငျးမှာရှိတဲ့ ကှနျပြူတာ အခငျြးခငျြး အပွနျအလှနျထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ Software ဖွဈပါတယျ.. အငျတာနကျရှိမယျဆိုရငျ အခွားကှနျပြူတာတဈလုံးကို ကိုယျ့ကှနျပြူတာသုံးသလို ဝငျရောကျသုံးစှဲနိုငျပါတယျ.. မွနျမာနိုငျငံကနေ အခွားကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးက ကှနျပြူတာကိုလညျး လှမျးပွီး သုံးလို့ရပွီပေါ့.. ဒါ့အပွငျ ခြိတျဆကျထားတဲ့ ကှနျပြူတာအခငျြးခငျြး ဖိုငျအလှဲအပွောငျးလညျး လုပျလို့ရပါတယျ.. Video Chat လညျးလုပျလို့ရပါတယျ..
ကိုယျ့ဆီက ID နဲ့ Password ကို အခွားသူကို ပေးလိုကျရငျ ကိုယျ့ကှနျပြူတာကို Remote Control လုပျနိုငျသလို အခွားကှနျပြူတာကို ထိနျးခြုပျခငျြရငျ အဲဒီ ကှနျပြူတာရဲ့ ID နဲ့ Password လိုပါမယျ.. ဖုနျးထဲမှာ app ထညျ့ထားပွီး ဖုနျးနဲ့ ကှနျပြူတာလညျး ခြိတျပွီး သုံးနိုငျပါတယျ..
Full Version လုပျနညျးကတော့
Setup နဲ့ Install လုပျပါ.. ပွီးရငျ ပိတျပဈပါ..
ကှနျပြူတာရဲ့ ညာဘကျအောကျခွနေားက Tray ထဲမှာ Teamviewer icon လေးကို ညာကလဈထောကျပွီး exit လုပျပါ..
Patch ကို Run ပွီး Patch ကိုနှိပျပေးလိုကျပါ.. Full Version သုံးနိုငျပါပွီ..
Home Page : https://www.teamviewer.com/
Download TeamViewer9Enterprise 9.0.32494 : 7.42 MB
Glary Utilities5Professional Edition 1 year Free license
Maung Pauk at 12:32:00 AM 0
Computer တွေအသုံးပြုမှုကြာလာတဲ့အခါ System ဖိုင်တွေပုံမှန်မဖြစ်တော့ဘဲ လေးလံလာမယ်၊ Software တွေ error တက်လာမယ်၊ Hardware တွေကို မောင်းနှင်တာ အခြေအနေပြောင်းလဲလာမယ် စတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်.. အဲလို ဖြစ်လာရင် Utilities Software တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. Glary Utilities ဟာ ကွန်ပျူတာကို ပုံမှန်အနေအထားပြန်ဖြစ်အောင် Maintenance လုပ်ပေးတဲ့ Software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. System ဖိုင်တွေ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့၊ Registry တွေ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့၊ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းဖို့၊ Hard Drive ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင် ပြန်လည် ပြုပြင်ဖို့ Glary Utilities က ကောင်းကောင်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်..
ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီ Software ဟာ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးအတွက် တစ်နှစ်စာကို 27.6 ဒေါ်လာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်..
အခု ၁ နှစ်စာ လိုင်စင်ကီးကို အလကားပေးနေပါတယ်...
CAPTCHA ကိုမှန်အောင်ဖြည့်ပြီး ကီးတောင်းလိုက်.. ကိုယ့်အီးမေးထဲကို ကီးရောက်လာမယ်...
https://www.glarysoft.com/glary-utilities-pro/ မှာ Software ဒေါင်းပြီး Install လုပ်.. Upgrade ကိုနှိပ်ပြီး နာမည်နဲ့ ကီးဖြည့်လိုက်.. Glary Utilities5(v5.94.0.116) Pro ကို ၁ နှစ်အလကား တရားဝင်သုံးလို့ရပါမယ်..
Computer တှအေသုံးပွုမှုကွာလာတဲ့အခါ System ဖိုငျတှပေုံမှနျမဖွဈတော့ဘဲ လေးလံလာမယျ၊ Software တှေ error တကျလာမယျ၊ Hardware တှကေို မောငျးနှငျတာ အခွအေနပွေောငျးလဲလာမယျ စတဲ့အခွအေနမြေိုးတှေ ဖွဈပျေါလာတတျပါတယျ.. အဲလို ဖွဈလာရငျ Utilities Software တဈမြိုးမြိုးကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ.. Glary Utilities ဟာ ကှနျပြူတာကို ပုံမှနျအနအေထားပွနျဖွဈအောငျ Maintenance လုပျပေးတဲ့ Software တဈမြိုးဖွဈပါတယျ.. System ဖိုငျတှေ ပုံမှနျပွနျဖွဈဖို့၊ Registry တှေ ပုံမှနျပွနျဖွဈဖို့၊ မလိုအပျတဲ့ အမှိုကျဖိုငျတှကေို ရှငျးလငျးဖို့၊ Hard Drive ကိုပုံမှနျဖွဈအောငျ ပွနျလညျ ပွုပွငျဖို့ Glary Utilities က ကောငျးကောငျး ကူညီပေးနိုငျပါတယျ..
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဒီ Software ဟာ ကှနျပြူတာ တဈလုံးအတှကျ တဈနှဈစာကို 27.6 ဒျေါလာ ကသြငျ့မှာဖွဈပါတယျ..
အခု ၁ နှဈစာ လိုငျစငျကီးကို အလကားပေးနပေါတယျ...
CAPTCHA ကိုမှနျအောငျဖွညျ့ပွီး ကီးတောငျးလိုကျ.. ကိုယျ့အီးမေးထဲကို ကီးရောကျလာမယျ...
https://www.glarysoft.com/glary-utilities-pro/ မှာ Software ဒေါငျးပွီး Install လုပျ.. Upgrade ကိုနှိပျပွီး နာမညျနဲ့ ကီးဖွညျ့လိုကျ.. Glary Utilities5(v5.94.0.116) Pro ကို ၁ နှဈအလကား တရားဝငျသုံးလို့ရပါမယျ..
AMD (ATI) Radeon Graphic Drivers for Windows 10
Maung Pauk at 10:33:00 PM 0
AMD ဟာ CPU နဲ့ Graphic Card ထုတ်လုပ်တဲ့ အကြီးစား ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. AMD (ATI) Graphic Card တွေစိုက်ထားပြီး Windows 10 မှာ အဆင်မပြေသူများအတွက် Card ရဲ့ Series နံပတ်အလိုက် အမှန်အကန် Driver သွင်းနိုင်အောင် AMD (ATI) Radeon Graphic Driver တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
<AMD ဟာ CPU နဲ့ Graphic Card ထုတျလုပျတဲ့ အကွီးစား ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပါတယျ.. AMD (ATI) Graphic Card တှစေိုကျထားပွီး Windows 10 မှာ အဆငျမပွသေူမြားအတှကျ Card ရဲ့ Series နံပတျအလိုကျ အမှနျအကနျ Driver သှငျးနိုငျအောငျ AMD (ATI) Radeon Graphic Driver တှကေို တငျပေးလိုကျပါတယျ..>
Version 18.3.4 - For Windows 10 (32bit)
Support Series 7700 to 7900, 8500 to 8900 and Rx 200
Version 18.3.4 - For Windows 10 (64bit)
Support Series 7700 to 7900 , 8500 to 8900 and Rx 200 to RX Vega
Version 15.7.1 - For Windows 10 (32bit)
Support Series 5000 to 7600 and 8000 to 8400
Version 15.7.1 - For Windows 10 (64bit)
Computer software Converter Giveaway
Leawo DVD Ripper 2018 Free 1 Year Full Version Registration Code [Win & Mac]
Maung Pauk at 1:39:00 AM 0
Leawo DVD Ripper ဟာ DVD Format, Video Format တွေနဲ့ Audio Format တွေကို Rip and Convert လုပ်ပေးရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. DVD တွေကနေ HDD တွေဆီကို အရည်အသွေးမပျက်စေဘဲ Backup လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်.. ဒါ့အပြင် iPhone, iPad, iPod Touch, PSP, PS3, Apple TV, Zune, Xbox 360, Blackberry, Android OS phones စတဲ့ Portable Player တွေအတွက် Format မျိုးစုံကိုလည်း အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာနဲ့ Rip လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ..
အခု နောက်ဆုံးထွက် Leawo DVD Ripper 2018 (v7.8.00) ကို ၁ နှစ်အလကား တရားဝင်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်.. ဘယ်လိုရယူမလဲ..
1. http://www.leawo.org/promotion/special-offer/ လင့်ကိုနှိပ်ပါ..
2. Share us on Facebook ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ့် Facebook မှာ Share လိုက်ပါ..
3. Windows အတွက်လား/ Mac အတွက်လား ရွေးပြီး ကိုယ့်နာမည်၊ အီးမေးဖြည့်ကာ ကီးကို ရယူနိုင်ပါပြီ..
ကိုယ့်အီးမေးထဲကိုလည်း Software Download Link နဲ့ Key ပို့ပေးပါတယ်..
Software Download Link မရရင် > http://www.leawo.org/downloads/dvd-ripper.html မှာ ဒေါင်းပါ..
Leawo DVD Ripper ဟာ DVD Format, Video Format တှနေဲ့ Audio Format တှကေို Rip and Convert လုပျပေးရာမှာ နာမညျကွီးတဲ့ Software ဖွဈပါတယျ.. DVD တှကေနေ HDD တှဆေီကို အရညျအသှေးမပကျြစဘေဲ Backup လုပျပေးနိုငျပါသေးတယျ.. ဒါ့အပွငျ iPhone, iPad, iPod Touch, PSP, PS3, Apple TV, Zune, Xbox 360, Blackberry, Android OS phones စတဲ့ Portable Player တှအေတှကျ Format မြိုးစုံကိုလညျး အရညျအသှေးကောငျးမှနျစှာနဲ့ Rip လုပျပေးနိုငျမှာပါ..
အခု နောကျဆုံးထှကျ Leawo DVD Ripper 2018 (v7.8.00) ကို ၁ နှဈအလကား တရားဝငျပေးနပွေီဖွဈပါတယျ.. ဘယျလိုရယူမလဲ..
1. http://www.leawo.org/promotion/special-offer/ လငျ့ကိုနှိပျပါ..
2. Share us on Facebook ကိုနှိပျပွီး ကိုယျ့ Facebook မှာ Share လိုကျပါ..
3. Windows အတှကျလား/ Mac အတှကျလား ရှေးပွီး ကိုယျ့နာမညျ၊ အီးမေးဖွညျ့ကာ ကီးကို ရယူနိုငျပါပွီ..
ကိုယျ့အီးမေးထဲကိုလညျး Software Download Link နဲ့ Key ပို့ပေးပါတယျ..
Software Download Link မရရငျ > http://www.leawo.org/downloads/dvd-ripper.html မှာ ဒေါငျးပါ..
Leawo DVD Ripper Pro Key-Features:
Rip DVD to video and audio in all fashionable formats.
Rip DVD to portable media players: iPhone, iPad, iPod Touch, PSP, PS3, Apple TV, Zune, Xbox 360, Blackberry, Android OS phones, etc.
Rip DVD to audio files: DVD to MP3, M4A, AAC and other audio file formats like AC3, ASF, AIFF, AMR, MP2, OGG, AU, RA, etc.
HD-RMVB output is available in this all-inclusive DVD Converter.
Powerful DIY functions: Trim DVD title or chapter, Crop DVD video, Adjust video effect, Add image or text watermark, Video and audio parameter settings
Provides practical editing functions like trimming/cropping movies, adjusting output parameters including video bitrate, video resolution, frame rate, aspect ratio etc.
Comes preloaded withanumber of preconfigured profiles for Apple iPhone, iPad, iPod, Apple TV, Sony PSP, Zune, Zen, etc.
Advanced 2D to 3D Conversion ability to enable users freely create 3D movies and rip 2D DVD to 3D movies for unlimited playback and enjoyment.
Leawo DVD Ripper support inputting multiple discs at the same time for converting DVD to common video file formats.
Rip DVD chapters and merge them into one.
Home Page : http://www.leawo.org/dvd-ripper/
Revolution of Adobe Systems Incorporated
Dominic Purcell at 12:27:00 PM 0
adobe ကို 1982 ခုနှစ်တွင် John Warnock and Charles Geschkeတို့မှ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင် ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ John Warnock and Charles Geschke တို့ဟာ Xerox Corporation’s Palo Alto (California) Research Center (PARC) မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစဉ်တည်းက ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင်ထက်မှာ အရာဝတ္ထုများ၏ အရွယ်အစား ပုံရိပ် စသည်တို့ကို ဖေါ်ပြပေးနိုင်မယ့် PostScript လို့ အတော်များများ သိထားကြတဲ့ programming language ကို ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ Xerox က ဒီ နည်းပညာကိုဈေးကွက်ထဲ ချပြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်မှာဘဲ .John Warnock နဲ့ Charles Geschke တို့ဟာ ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီ ထူထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
Adobe မွေးဖွားရာနေရာကတော့ John Warnock ရဲ့ ရှုပ်ပွပေရေနေတဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာပါ။ Adobe ရဲ့ logo ဖြစ်တဲ့ A စာလုံးဒီဇိုင်းကိုတော့ ဇနီးဖြစ်သူ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ Marva Warnock က ရေးဆွဲပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
1982 ခုနှစ်မှာ apple ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Steve Jobs က Adobe ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းနဲ့ ၀ယ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့်လည်းJohn Warnock တို့က ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ် .................
ဒါပေမယ့်လည်း John တို့ကို ထောက်ပံ့ထားတဲ့ investorsတွေက စောဒကတွေ တက်ကြတာမို့ adobe ရဲ့ Share 19 %ကို Steve Jobs ထံရောင်းချပေးဖို့ သဘောတူညီ ခဲ့ပါတယ်။
PostScript Type 1 သို့ Adobe Type 1
PostScript Type 1 ဟာ single-byte digital font အတွက်font format တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ Adobe Type Manager software နဲ့ PostScript printers တို့အတွက် အသုံးပြုတာပါ။ ဒါအပြင် font hinting ကိုလည်း support ပေးထားပါသေးတယ်။ Type 1 fonts ကိုတော့ Mac OS X နဲ့ Windows 2000 မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Apple ဟာ လက်ရှိ ကျနော်တို့ အသုံးပြုနေကြတဲ့ TrueType font ကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ PostScript Type 1ကို ယှဉ်ဖို့အတွက် apple က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ..........
နောက်ပိုင်းမှာ True Type ရဲ့ လိုင်စင်ကို Microsoft. သို့ ရောင်းချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
1980 နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ Adobe ဟာ Apple Macintoshကွန်ပျူတာတွေမှာ သုံးလို့ရမယ့် vector-based drawing programတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Adobe Illustrator ကို စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်တွေကို တည်းဖြတ်ဖို့အတွက် Adobe Photoshopကို 1987 မှာ Thomas and John Knoll တို့ ညီအစ်ကို ၂ ဦးက ပူပေါင်း ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ 1962 မှာ မွေးတဲ့ John Knoll ဆိုတာ အခု ခင်ဗျားတို့ ကြည့်နေတဲ့ Star war movies တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က Visual effects တွေ ဖန်တီးပေးတဲ့ ဆရာကြီးပေ့ါဗျာ ................
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ John Knoll ဟာ visual effects supervisor and chief creative officer (CCO) at Industrial Light & Magic (ILM)ပါ။ Star war တင်မကဘဲ Pirates of the Caribbean series တွေမှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ Visual Effects တွေကြောင့် Knoll နဲ့ အဖွဲ့ ဟာAcademy Award for Best Visual Effects ဆုကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်
သူ့ရဲ့ အစ်ကို Thomas Knoll ဆိုတာကလည်း Adobe Photoshop ဆိုတာကြီး ဖြစ်လာဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ software engineer ကြီးဗျ..မတူညီတဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့လျောက်လှမ်းတဲ့ ညီအစ်ကို ၂ ယောက်ရဲ့ဖန်တီးမှု ကြီးကြောင့် ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့တွေ Adobe Photoshop ဆိုတာကြီး သုံးနေရတာပေ့ါဗျာ။ အဖေထက် သား ၁ လကြီးဆိုသလို အစ်ကိုဖြစ်သူထက် ညီဖြစ်သူ Jhon က ပိုပြီး လက်စောင်း ထက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အပေါ်မှာရေးပြထားတဲ့ အချက်အလက် လေးလောက်နဲ့တင်
သိသာနိုင်ပါတယ်။ ( အော် ကြုံတုန်း ပြောရဦးမယ် ကျနော်တို့ စောင်ဘားမား ပြည်မယ်ဆိုရင် အဲလို အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ အတော်ဝေးတယ်။ Teamwork ဆိုတာ နားမလည်သေးသရွေ့ ၊ ၂ ယောက်ရှိရင် ၃ ဖွဲ့ ကွဲချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့တော့ မဖြစ်သေးပါဘူးလေ။ မြင်သာထင်သာအောင် ပြောရရမယ်ဆိုရင် ရွှေရန်ကုန်က ၀ကခ ဆိုလား ဘာလား အာ့လေးသာ ကြည့်ပေ့ါဗျာ ငါလုပ်ချင်တာ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အပေါက်ဒေ ( တား ဘာမှ သိပုနော် သူများပြောလို့ ထည့်ရေးတာ :P LOL အင်းစိန်မှာ ငစိန်ဆန်တော့ မစားနိုင်သေးဘူး ။ ၀က်ကလေးနဲ့ညား ကလေး ၃ ယောက်လောက် မွေးဦးမှာ :P )
Thomas and John Knoll ဟာ Photoshop Software ရဲ့ distribution license ကို Adobe Systems Incorporated သို့ 1988 ခုနှစ်မှာ ရောင်းလိုက်ပါတယ်။
1989 ခုနှစ်မှာတော့ Adobe ဟာ Thomas and John Knoll တို့ဆီက ၀ယ်ယူထားတဲ့ Program ကို အသုံးပြုပြီး Apple Macintosh ကွန်ပျူတာမှာ သုံးလို့ရမယ့် graphics editing program ဖြစ်တဲ့ Photoshop ကို စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Photoshop 1.0 လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။
1993 မှာတော့ Adobe ဟာ Portable Document Format အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ PDF ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Adobe Acrobat and Reader softwareကိုပါ တခါတည်း ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (အဟင်း မောင်မင်းကြီးသား ကျန်းမာစေ ချမ်းသာဒေ ဒင်းတို့ကောင်းမှု နဲ့ မောင်မောင်ရဲ ၊ အိမ်ဖော်မလေး
မိအေး တို့ ဖတ်ခဲ့ရတာ LOL :P Do u know what i mean )
Pagemaker ကို adobe ရဲ့ PostScript page description language ကို အသုံးပြုပြီး 1985 ခုနှစ်မှာ desktop publishing (DTP) softwareထုတ်လုပ်တဲ့ Aldus Corporation က ဖန်တီး ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့
1994 မှာ Aldus ဟာ Adobe နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
pagemaker release history
Aldus Pagemaker 1.0 ကို 1985 ခုနှစ် ဂျူလိုင် လမှာ ပန်းသီးကွန်ပျူတာအတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၊ 1986 မှာတော့ IBM ကွန်ပျူတာ အတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Aldus Pagemaker 2.0 was released in 1987
Aldus Pagemaker 3.0 ကို 1988 April မှာ Macintosh အတွက် ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး 1988 May မှာ Window 2.0 အတွက်ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။
1990 မှာတော့ function တွေ ပိုပြီး စုံလင်ပြီးဖြစ်တဲ့ Aldus Pagemaker 4.0 ကို Apple Macintosh အတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Window အတွက်ကိုတော့ 1991 မှ ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
January 1993 မှာတော့ Aldus PageMaker 5.0 ကို ထပ်မံ အဆင့်မြှင့်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Aldus Corporation ဟာ Adobe Systems နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးနောက်မှာတော့ Aldus Pagemaker နာမည်အစားAdobe PageMaker လို့ နာမည်ပြောင်းပြီး version အနေနဲ့ 6.0 ကို 1995 မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Adobe PageMaker 6.5 ဟော လာပါပြီး ကျနော်တို့လို 90's Kid တွေ သုံးဖူးတဲ့ Adobe PageMaker 6.5 ကို 1996 မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဟင်း 96 မှာ ထွက်တဲ့ ဟာကို 2007 မှာမှသုံးဖူးတာကွ ငိငိ
2001 မှာတော့ Adobe PageMaker 7.0 ကို ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး Window XP မှာ အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် Windows Vista မှာတော့ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး .... Adobe PageMaker 7.0 ဟာ PageMaker ရဲ့ နောက်
ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီးတော့ ထပ်မံ ထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ Adobe PageMaker အစား နောက်ပိုင်းမှာ
Adobe Indesign အနေနဲ့ဘဲ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Adobe ရဲ့ ထုတ်ကုန်များ
Graphic design software မှာတော့ အောက်ပါ software တွေကို ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။
Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker,
Adobe Lightroom, Adobe InDesign,
Adobe InCopy, Adobe Illustrator,
Adobe Freehand, Adobe Fireworks,
Web design programs မှာတော့ အောက်ပါ software တွေကို ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်
Adobe Dreamweaver, Adobe Contribute,
Adobe Muse, Adobe Flash Builder,
Adobe Flash, and Adobe Edge
Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements,
Adobe After Effects, Adobe Prelude,
Adobe Spark Video, Audio editing software
eLearning software မှာတော့ အောက်ပါ software တွေကို ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်
Adobe Captivate Prime (LMS platform),
Adobe Presenter Video Express and
Adobe Connect (alsoawebconferencing platform)
Digital Marketing Management Software မှာတော့ အောက်ပါ software တွေကို ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်
Adobe Marketing Cloud,
Adobe Experience Manager (AEM 6.2),
XML Documentation add-on (for AEM) ,
Server software မှာတော့ အောက်ပါ software တွေကို ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်
Adobe Content Server and Adobe LiveCycle Enterprise Suite,
Adobe မှ ဖန်တီးခဲ့သော File Formats များ
PDF's predecessor PostScript, ActionScript,
Shockwave Flash (SWF),
Flash Video (FLV), and
Web-hosted services အနေနဲ့တော့
Adobe Color, Photoshop Express,
Acrobat.com, and Adobe Spark
ဒါကတော့ Adobe နဲ့သတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကျဉ်း ဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်စာ ရေးမယ်ဆိုရင် ရေးမကုန်နိုင်လောက်အောင်များပါတယ်။ adobe ရဲ့ အကြောင်းကိုသာ သီးသန့်ရေးလို့ မရသလို Adobe , apple , microsoft တို့ ပတ်သက်မှု ၊ font war , စတာတွေအပြင် adobe ရဲ့ လက်အောက်ကို ရောက်သွားတဲ့ company အသေးတွေ ၊ photoshop လို
pagemaker လို မူလဖန်တီးသူ ၁ ယောက် တကယ် အောင်မြင်တော့ adobe ရဲ့ အောက်မှာ စသည်ဖြင့် အကြောင်းအရာမျိုးစုံ တွေရှိတာကြောင့် ကိုယ်တိုင်ဘဲ ရှာဖွေ ဖတ်ရှု ဖို့ ညွှန်းပါရစေ ...........
နားလည်သလို အဆင်ပြေသလို မတောက်တခေါက် ဘာသာပြန်ထားကြောင့် အမှားပါရင် ခွေးလွှတ်ပါလို့ ....... ကိုက်ရင် ပြန်ကိုက် မှာ အဟင်း :p
ထွန်ဆွေလိတ် ဘိုင် မင်းသူအောင်
e-books English Lesson
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် ဆရာဦးအောင်ဟိန်းကျော် ရဲ့ ဆရာလွတ် အင်္ဂလိပ်စကားပြော စာအုပ်
Maung Pauk at 12:42:00 PM 0
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် ဆရာဦးအောင်ဟိန်းကျော် ရဲ့ ဆရာလွတ် အင်္ဂလိပ်စကားပြော စာအုပ်ကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. စာအုပ်ဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိသူတွေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. စာအုပ်ဝယ်ဖို့ အဆင်ပြေသူတွေကတော့ မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူ အားပေးသင့်ပါတယ်.. တော်တော် ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ပါ.. ဝါကျ တွေ လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ ထိမိလှပါတယ်.. နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ စကားပြောတွေအတွက် အထိရောက်ဆုံး ဝါကျတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့ကျင့်ပြီး လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပါတယ်..
အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာသူမြားအတှကျ ဆရာဦးအောငျဟိနျးကြျော ရဲ့ ဆရာလှတျ အင်ျဂလိပျစကားပွော စာအုပျကို ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ.. စာအုပျဝယျဖို့အခကျအခဲရှိသူတှေ၊ နိုငျငံရပျခွားကိုရောကျရှိနတေဲ့သူတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီး ပွနျလညျမြှဝခွေငျးဖွဈပါတယျ.. စာအုပျဝယျဖို့ အဆငျပွသေူတှကေတော့ မူရငျးစာအုပျကိုဝယျယူ အားပေးသငျ့ပါတယျ.. တျောတျော ကောငျးတဲ့ စာအုပျပါ.. ဝါကြ တှေ လိုရငျးတိုရှငျးနဲ့ ထိမိလှပါတယျ.. နစေ့ဉျ အသုံးပွုနတေဲ့ စကားပွောတှအေတှကျ အထိရောကျဆုံး ဝါကတြှကေို လှယျလှယျကူကူ လကေ့ငျြ့ပွီး လကျတှအေ့သုံးခနြိုငျပါတယျ..
Download : 45.23 MB
Glary Utilities5Professional Edition 1 year Free...
Leawo DVD Ripper 2018 Free 1 Year Full Version Reg...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် ဆရာဦးအောင်ဟိန်းကျော် ရဲ...